Habka Wanaagsan ee Lagu Cabbirayo Maalinlahaaga Khudaarta Apple Cider Vinegar
Cabitaanka & Kookaha Cabitaanka aan khamriga ahayn
Fiiri Isbedelka, Dareemo, Era Sigaar Cabitaanka Sisin
Qalabka cateriga ah ee cateriga ah (ACV) ayaa qaadanaya daqiiqad. Prundotic oo ah dariiqo aan caadi aheyn oo aan la shaacin ayaa waxaa lagu dhajiyay nadaafad fayadhowrka oo ah wax kasta oo ka soo baxa maqaarka maqaarka si dheefshiidka liita, iyo xitaa xirfadlayaasha caafimaadka caadiga ah waxay isku raacaan in ay leedahay faa'iidooyin caafimaad. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in acetic acid ee ACV (iyo dhammaan caleemaha, dhab ahaantii) laga yaabo inay ku caawiyaan cudurada bararka leh sida colitis boogta.
Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay dadaallada culeyska miisaanka iyo in la joojiyo cuntooyinka nacnaca ah marka ay cunaan cunto ka hor intaanay cunin, taas oo yareyneysa kalkaalinta kalooriyada, laakiin sidoo kale waxay ka caawineysaa in la ilaaliyo sonkorta dhiigga iyo insulinta jeeg.
ACV waa mid aad u caan ah, xitaa muuqaal, jimicsi ku salaysan caafimaadka ayaa ku heesaya heesaha. Waxyaabaha ay ka midka yihiin Hilary Duff iyo Gabby Douglas, oo ay ka mid yihiin kuwa kale, waxay caddeeyeen in walxaha ugu horreeya ee subaxda ay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee hab nololeedkooda maalin walba.
Laakiin xaqiiqda waa la sheegaa, dhadhanka (maaha in la sheego urka) ee tooska ah ee ACV kaliya maaha dabka, waa rinjiga sheyga laga sameeyay. Taasina waa sababta ay dad badani u wajahayaan tallaal. Suufkaaga sanka, si deg deg ah hoos ugu dheji, ka dibna ku deji wax xaalad ah - ama sidaas macquul ayaa tagaya.
Dhibaatadu waxay tahay, ACV waa mid aad u sarreysa, oo cabitaankana aan la sifeynin waxay waxyeelleyn kartaa cirridka ilkahaaga iyo nudaha ku xiraya hungurigaaga.
Taasina waa sababta ugu badan ee xirfadlayaasha caafimaadka ay kugula talinayaan halkii aad ku dari lahayd qaado ama labo biyo ama cabbitaan kale. Habkani wuxuu ka dhigayaa isticmaalka badan ee ACV, laakiin weli way ka fog tahay delicious.
Nasiib wanaag, habdhaqankaaga ACV wuxuu noqon karaa mid qurux badan, xitaa farxad leh, haddii aad eegto xigmadda qiyamka gumeysiga.
Boqollaal sano ka hor, waxay sidoo kale ahaayeen kuwo cabaya ACV caba-nadiif ah oo ah maadada caafimaadka qaboojinta, kaliya waxay ku sameenayeen qaab isbeddel ah.
Waa Maxay Bedelka?
Beddelku waa cabitaan tartiib ah oo lagu garto afar qaybood oo waaweyn: khal, ginger, biyo, iyo macaaneeye nooc ka mid ah; sida caadiga ah sharoobada maple, masagada, juuska, ama malab. Waxay dib ugu soo noqotaa ugu yaraan 1600aad iyo qarniyaal loogu talagalay in ay dib u soo ceshadaan shaqaale beeralay ah oo adag iyo kuwa kale ee soo maray Maraykanka kuwaas oo u baahnaa habka lagu nadiifiyo oo loo baddalo qalabka elektaroolka ee lumay - nooc ka mid ah cabitaanka isboortiga oo idil.
Waa maxay dhadhanka isbeddelka?
Waxaad ka fekereysaa bedelka sida lemonade, laakiin halkii laga heli lahaa citrus, oo aan si sahlan loo heli karin dadka asal ahaan Maraykanka ah, khal-qashinka waa astaamaha doorashada. Sida ugu badan ee liinta, isbedelku waa mid aad u macaan badan iyo wax ka badan ama ka yar macaan, taas oo ku xidhan inta ay sonkorta aad ku dareyso.
Sameynta Bedelka Guriga
Waxaad samayn kartaa gawaarida galaas wakhti, qaabab badan oo loogu talagalay dad badan, ama sida feejignaan leh. Qalabka ugu dambeeya waa habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay sababo yar: Tani waxay ku qaadataa meel yar oo qaboojiyaha ah, waxayna joogtaa waqti dheer.
Sidoo kale waxaan jeclahay in aan ka jaro meyada lime macaan iyo caarada nafaqooyinka dheeraadka ah, oo ay ku jiraan fitamiin C
Sababtoo ah waxaan isticmaali jirtey xayawaanka, marwalba waxaan dooran karaa nadiifinta, nadiifinta jidhka si looga fogaado inta badan suurtagal ah kiimikooyin badan oo macquul ah. Macmacaanka dabiiciga ah ee lime wuxuu sidoo kale ii ogolaanayaa inaan yareeyo caddadka sonkorta ee aan ku daro diiradeyda. Si daacadnimo ah, waxaan helay dhibic halkaas oo aanan ku darin wax macaan ah, laakiin haddii aad ku cusub tahay ciyaarta ACV, waxaan kugula talin lahaa inaad ka bilowdo qaado qaado oo aad u hagaajiso dhadhankaaga.
Sida macaankiina, macmacaan-goynta ayaa ku baaqeysa malab ceeriin ah, taas oo leh hanti badan oo caafimaad leh oo u gaar ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa malab caadi ah, sharoobada maple dhabta ah, ama juus ah. Waxaan xitaa la ogaaday in ay bedelaan juice cherry tartan diiradda qiyaas dheeraad ah oo ah antioxidants xoog leh.
Ugu dambeyntiina, ACV-gaagu waa inuu ahaadaa mid cayriin iyo dabiici ah sababtoo ah macnaheedu waxa weeye waxa ku jira qaddarka ugu badan ee macdanta qashinka iyo xeryaha kale ee faa'iido leh.
Waxaad awoodi doontaa inaad u sheegto in uu yahay wax cayriin sababtoo ah waxay u ekaan doontaa murugada iyo daruuraha dhalada leh, oo leh qashin qulqulaya oo ku faafaya. Waa in sidoo kale si cad loogu calaamadiyaa habkaas haddii aadan hubin.
Beddelka iyo ACV-ga ee isku deyeya
Apple Cider Viregar Fire Dambiga ka soo Spruce
Khariidadda Beddelka Laga soo bilaabo 1853 laga soo qaaday Shaxanka Maraykanka
Xilliga dayrta Furista Ciderel ee Cagaaran iyo Cadaadiska
Khadadka Gacanka Coconut ee ka yimaada Cunnooyinka Dabiiciga ah Foodie
Tartanka Cherry-ka oo ka yimid Yuri Elkaim
Iskudhufka Ginger Strawberry oo ka yimid raashin si aad u quudiso
Beer Lemon (Clara Beer) Cuntada
Xayawaanka Isbaanishka iyo Gobollada
Apéritif: A Cocktail ka hor Casho
2 Weyn Irish Whiskey iyo Ginger Ale (ama Beer)
Waa maxay Wineedka Xoog leh?
Kufada Hamburger leh Mashiinka Madow iyo Caleenta
Eggs Benedict for Labada Recipe
Panettone iyo Pandoro: Classic Cakes Christmas
Forcemeat: Waxyaabaha ugu Muhiimsan ee Sausage-Making
Waxyaabaha qashinka lagu dubo ee la cuno: Saar, Xilliga, Grill, iyo Baste
Qeexitaanka Dufanka Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah
Khudaarta Cunto Khudradeed
Vegan Cagaaran Beerka iyo Cagaarka Cagaaran ee Faafa ama Fare
Saddex Basbaas iyo Sonkor ah
Darajada saafiga ah
Waa maxay Caanaha aan Cagaaran lahayn?